In ka badan 2,000 oo ka tirsan shaqaalaha dalxiiska Jamaica ayaa la tallaalay 3 -dii maalmood ee ugu horreeyey ee tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » In ka badan 2,000 oo ka tirsan shaqaalaha dalxiiska Jamaica ayaa la tallaalay 3 -dii maalmood ee ugu horreeyey ee tallaalka
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
HM MAHADSANID - Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett, (taagan) wuxuu u muujinayaa mahadnaq dhab ah tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha dalxiiska muddadii indha -indhayntooda ka dib markii uu ka qaatay tallaalka ay doorteen goobta Moon Palace blitz Jimcihii, Sebtember 3, 2021. Wuxuu uga mahadceliyay inay kaalintoodii ka qaateen ilaalinta dalxiiska waaxda, adoo qaadanaya tallaalka nafaha badbaadiya
In ka badan 2,000 oo ka tirsan shaqaalaha dalxiiska ee Jamaica ayaa la tallaalay iyada oo la adeegsanayo mid ka mid ah saddex tallaal oo loo diyaariyey dhowr goobood oo istiraatiiji ah oo ay abaabuleen Kooxda Hawlgalka Tallaalka Dalxiiska ee cusub, saddexdii maalmood ee ugu horreeyey hawlihii waaweynaa. Guddi-hawleedka, oo loo aasaasay inuu fududeeyo tallaalka dhammaan shaqaalaha dalxiiska ee jasiiradda oo dhan, ayaa abaabulay tallaallo taxane ah oo isdaba-joog ah, iyadoo kii ugu horreeyey la qabtay 30-kii Ogosto.
Dalxiiska Jamaica oo si wanaagsan uga socda tallaallada COVID-19 ee shaqaalaha dalxiiska.
Wasiirka Dalxiiska ahna Ku-xigeenka Guddoomiyaha Guddi-hawleedka Tallaalka Dalxiiska ayaa ku sugnaa goobta tallaalka ee Qasriga Dayaxa si ay ugu mahadceliyaan kooxaha iyo shaqaalaha.
Goobo tallaal oo dheeraad ah ayaa laga dhisayaa Negril, Ocho Rios, Montego Bay iyo Xeebta Koofureed iyadoo la rajaynayo in la tallaalo ilaa 600 qof maalin kasta goob kasta.
Ka dib markii la tallaalay 1,200 oo shaqaale ah oo ku sugnaa Hotel Pegasus 30kii Ogosto, in ka badan laba maalmood (Sebtembar 2-3) Sandals Negril waxay arkeen qaar ka mid ah 556 shaqaale dalxiis oo qaadanaya tallaaladii ay doorteen, halka ay ku sugnaayeen Qasriga Dayaxa ee Ocho Rios Jimcihii, Sebtember 3 , ilaa 385 shaqaale ah ayaa la tallaalay. Si kastaba ha ahaatee, Moon Palace waxay lahayd boog hore taas oo 320 shaqaale ah ay heleen jabka ilaa iyo hadda boqolkiiba 60 shaqaalaheeda ayaa la tallaaley.
Jamaica Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett, iyo Ku-xigeenka Guddoomiyaha Kooxda Hawlaha Tallaalka Dalxiiska, Clifton Reader, waxay ku sugnaayeen goobta tallaalka Qasriga Dayaxa si ay ugu kuurgalaan hawlaha halkaas ka socda iyo inay u mahadceliyaan kooxaha wada shaqaynaya oo ay ka mid yihiin kalkaaliyayaasha iyo dhakhaatiirta ka socda waaxda gaarka loo leeyahay ee ku hawlan hawsha.
Wasiir Bartlett wuxuu yiri, “hindisaha waa iskaashi ka dhexeeya Wasaaradda Dalxiiska, Jamaica Hotel iyo Ururka Dalxiiska (JHTA), iyo Hindisaha Tallaalka Waaxda Gaarka ah (PSVI) si loo wado tallaalka 170,000 oo shaqaalaha warshadaha ah waaxaha. ”
In kasta oo uu qirayay in tani ay tahay amar dheer, Mr. Bartlett wuxuu ahaa mid rajo wanaagsan leh “waxaan aragnaa rabitaanka shaqaalaha hadda sida ku cad soo bixitaankii aan aragnay 3 -dii maalmood ee la soo dhaafay tan iyo markii barnaamijku billowday.”
Wuxuu sheegay in goobo badan oo blitz ah laga dhisi doono Negril, Ocho Rios, Montego Bay iyo Xeebta Koonfureed iyadoo rajo laga qabo in la tallaalo ilaa 600 qof maalin kasta. "Ujeeddadu ma aha in lagu soo rogo kaabayaasha caafimaadka ee jira si loo suurtogeliyo barnaamijkan tallaalka, sidaa darteed dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha iyo dhammaan qabanqaabyada kaabayaasha ayaa annaga na siinay isbahaysiga," ayuu yidhi.
Wasiirka ayaa codsi shaqsi ah u jeediyay shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha dalxiiska, qoysaskooda iyo saaxiibadooda ku dhow si ay u helaan goobahan sida gaarka ah loo habeeyay ee bixiya tallaalada AstraZeneca, Pfizer iyo Johnson & Johnson oo lacag la'aan ah. “Cidna ma celinno,” ayuu hoosta ka xarriiqay.
Dhanka kale, Mudane ganacsatada farsamada gacanta, hawlwadeennada gaadiidka, shaqaalaha villa iyo kuwa soojiidashada leh. ” Dadka qaata qiyaasta hore ee Moon Palace ayaa sidoo kale dib loogu casuumi doonaa qaddarkooda labaad.
Dhammaan sagxadda dhulka ee hoteelka galbeed-galbeed ayaa loo furay goobta blitz ka-qaybgalayaashu waxay dhex mareen qubeys fayadhowr oo otomaatig ah ka hor inta aysan soo gelin goobta halkaas oo sidoo kale lagu daaweeyay bandhig muuqaal maqal ah oo ku saabsan fayraska COVID-19 iyo tallaallada.
Mudane Reader wuxuu sheegay in hudheelada waaweyn ee leh awooda inay sidaas sameeyaan, lagu dhiirigeliyey inay bixiyaan khidmadda maamulka si loo hubiyo in qof kasta oo soo baxa uusan bixin doonin wax lagu tallaalo. "Waxaan u rabnaa dadkeenna jawi shaqo oo ammaan ah sida kaliya ee lagu samayn karaa waa tallaal," ayuu yiri Mudane Reader.
Ka-qeybgalaha Spa ee Moon Palace, Chevanise Williams waxay sheegtay inay fahantay in qaadashada tallaalka aysan dawo u ahayn COVID-19 laakiin “haddii aad qaaddo fayraska, waad ogtahay in astaamuhu ay ka sii yaraan doonaan, sidaa darteed waa muhiim… taas, sababtoo ah waa inaan ilaaliyaa qoyskayga iyo sidoo kale dadka halkan imanaya. ”
Isle of Dead wuxuu helaa 1.3 Milyan
Carnival si loogu shaqeeyo 75% ee Awoodda Fleet dhamaadka ...
Duulimaadyada Koonfurta Afrika hadda waxay la socdaan United Airlines iyo ...
Airbnb: 11 magaalo oo ugu wanaagsan Latin America ee Mareykanka ...
Maxaa ku cusub Bahamas bisha Sebtember
Xiddigta Safarka ee Dumarka Tansaaniya ku faraxsan
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay diyaarad u dhalatay Czech Republic iyo France ...
Dalxiiska Seychelles Oo Rajo Wanaagsan Ka Muujiyay Jidhkeedii Ugu Horeeyay ...
Nordwind Airlines oo duulimaad toos ah ka bilowday St ...
Duulimaadyadii Kazakhstan waxay dib ugu bilaabanayaan 16 dal oo kale hadda
Jamaica Waxay Diyaar U Tahay Kulamo Muhiim Ah Canada Iyo ...
Sidee COVID Saameyn ugu yeelatay Safarka iyo Dalxiiska Faransiiska 2020
Maalinta Dalxiiska Adduunka iyo Google
Duulimaadyo badan oo London, Kyiv iyo Istanbul oo Hawada ...
Ajaanibta si buuxda loo tallaaley ayaa soo geli kara Mareykanka ...
Moscow Sheremetyevo oo loogu magacdaray Gegida Diyaaradaha ugu Waqtiga Badan ...
Martinique wuxuu ku socdaa xannibaadda, wuxuu u sheegaa dalxiisayaasha inay baxaan
Seychelles iyo Shanghai Changfeng Ocean World si wadajir ah ...
Xoghayaha cusub ee Wasaaradda Duulista Hawada ee Hindiya ...
Muusikada Marna kuma Joogto New Orleans, xitaa inta lagu jiro ...
eTurboNews waxay taagan tahay gadaasha Xorriyadda Saxaafadda iyo QALIN ...
Diyaaradda Condor ayaa dib u bilawday duulimaadkeedii Jasiiradaha Jannada ...
British Airways: Marwooyin iyo marwooyin dambe ma jiraan
Hal qof ayaa dhintay, tobanaan ayaa lagu la'yahay masiibo laba doon ah oo ka dhacday Hindiya
Rome Waxay Leedahay Buundo Cusub: Mashruucii La '...
Soo -noqoshada warshadaha: IMEX America waxay soo celisaa ...
Jardiinooyinkan qaran ee Mareykanka ayaa ah kuwa ugu liidata
Infekshannada COVID ee xilligan la joogo Goobaha Fasaxa Xeebaha
Kicitaanka Qiimaha Kaarboon Gudaha
FAA waxay soo saartay digniin cusub oo Boeing 737 MAX ah
Dadka ku nool New Orleans ayaa lagu amray in ay ka guuraan maaddaama ay Duufaanta ...
Khasnadaha Seychelles: 5 Hadiyado Maxalli ah oo Guryaha Lalagu Celiyo
Bahamas waxay ku jirtaa Meel Wanaagsan si ay uga Faa'iidaysato ...